#MourinhoOut လှုပ်ရှားမှု စတင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ စပါး ပရိသတ်များ - SPORTS MYANMAR
#MourinhoOut လှုပ်ရှားမှု စတင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ စပါး ပရိသတ်များ
၀င်ဝင်ချင်း ဆောက်နဲ့ ထွင်း ဆိုသလို ပါပဲ . . . စပါး နည်းပြ အဖြစ် ခန့်အပ်ပြီး ကြောင်း ကြေညာချက် ၂၄ နာရီ မပြည့်ခင် မှာပဲ စပါး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ မကျေနပ် မှု တွေ ဟာ အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ ပွက်လော ရိုက် ခဲ့ပါပြီ ။ မော်ရင်ဟို အနေနဲ့ စပါး အတွက် တရားဝင် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တောင် မလုပ် ရသေး သလို ဘာဆို ဘာ မှ မစတင် ရသေး ပါဘူး ။ သိပ်ကို စောလွန်းတယ် လို့ များ မထင်မိ ကြဘူးလား . . .
ပိုချက်တီနို ဟာ စပါး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ မေတ္တာ ကို ရရှိ ထားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီလို လူ တစ်ယောက် ကို ရုတ်တရက် ထုတ်ပယ် လိုက်တာ ဟာ ပရိသတ်တွေ ကို အံ့သြစေမှာ သေချာ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာ ကို မော်ရင်ဟို ရောက်လာတာက စပါး ပရိသတ်တွေ အတွက် ပိုလို့ အံ့သြ စေခဲ့ တယ်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ တုန့်ပြန်မှု ကို ကြည့်တာ နဲ့ သိသာ လွန်းခဲ့ ပါတယ် ။
စပါး ပရိသတ်တွေ ဟာ မော်ရင်ဟို ကို နည်းပြသစ် အဖြစ် ခန့်အပ် တဲ့ သတင်းတွေ ရဲ့ အောက်မှာ စိတ်ပျက် မိကြောင်း နဲ့ မော်ရင်ဟို အမြန်ဆုံး ထွက်သွား စေလိုကြောင်း မှတ်ချက်တွေ ကို ၀င်ရောက်ရေး သားသွား ခဲ့ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် မှာတော့ တွစ်တာအသုံးပြု သူတွေ ဟာ #MourinhoOut ဆိုတဲ့ တွစ်တာ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခု ကို ပြုလုပ် နေပြီး စပါးနည်းပြသစ် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက် အပြီး နာရီ အနည်းငယ် အတွင်းမှာတင် အရေအတွက် အလွန် များပြား လာခဲ့ တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
“မာတစ် ကြီး ဇန်နဝါရီ ကျရင် ရောက်လာတော့မယ် ဆိုတာ ကြိုသိနေတယ် ၊ ကိန်း ကို လည်း လူကာကူ ၊ မာတာ တို့ နဲ့ လည်းဦးမှာ ။ မော်ရင်ဟိုကြီး ထွက်ပါတော့” လို့ ပရိသတ် တစ်ဦးက တွစ်တာ မှာ ရေးသားထား ခဲ့ ပါတယ် ။
အခြား တစ်ဦး ကလည်း “စပါး ကို တစ်ဘဝ လုံး အားပေး လာခဲ့ တယ် ၊ ဆိုးရွားတဲ့ စိတ်ပျက် စရာ အချိန်တွေ ကို အများကြီး ဖြတ်သန်း ခဲ့ဖူး တယ် ၊ ဒါပေမယ့် ဒီ တစ်ခု ကတော့ ထိပ်ဆုံး ပါပဲ ။ မော်ရင်ဟို ထွက်ပေးပါ” လို့ ရေးသားရင်း ပေါ်တူဂီ နည်းပြကြီး ကို အလို မရှိကြောင်း ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ခဲ့ ပါတယ် ။
မော်ရင်ဟို ဟာ စပါး ကို ငွေတွေ အများကြီး ကုန်ပြီး ဒေဝါလီ ခံရအောင် လုပ်ပစ် လိမ့်မယ် လို့ ရေးသား သူ ရှိခဲ့ သလို စပါး ရဲ့ မှောင်မိုက်တဲ့ ကာလတွေ ရောက်လာပြီ ၊ ဒီထက် ဆိုးတဲ့ ခေါ်ယူမှု မျိုး မကြုံရနိုင်တော့ ပါဘူး ၊ တွေ့ ကရာ တွေ လျောက်ခေါ် တော့မှာပဲ စတဲ့ မှတ်ချက်တွေ ကို ၀င်ရောက် ရေးသား သွားခဲ့ ကြပါတယ် ။
ပရိသတ် အချို့ ဟာ လာမယ့် စနေနေ့ မှာ ၀က်စ်ဟမ်း နဲ့ ကစားမယ့် လန်ဒန် ဒါဘီ မှာ မော်ရင်ဟို ကို ကန့်ကွက် ကြောင်း ပွဲကြည့်စင်ပေါ် ကနေ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ဖို့ အတွက် စာတမ်းတွေ ပြင်ဆင် နေကြပြီ လို့ ကြားသိ ရ ပါတယ် ။ သေချာ တာကတော့ မော်ရင်ဟို ဟာ စပါး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ မေတ္တာ ကို ရယူနိုင်ဖို့ လွယ်ကူ မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ပါပဲ ။
စပါး ပရိသတ် တွေ ဘာလို့ ဒီလို လုပ်ရသလဲ ဆိုတာ တိတိ ကျကျ သိရဖို့ ခက် ပါတယ် ။ အဖြစ်နိုင် ဆုံး ကတော့ မော်ရင်ဟို ဟာ စပါး ရဲ့ လန်ဒန် ဒါဘီ ပြိုင်ဘက် ချဲလ်ဆီး ကို နည်းပြ ခဲ့တာ ၊ စပါး ကို မကြာခဏ ထေ့ ငေါ့ ပြောဆို တာ ၊ မန်ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဖြစ်ခဲ့တုန်း က စပါး ကို အနိုင် ယူပြီး နောက် လုပ်ပြ ခဲ့တဲ့ အမူ အရာ တွေ ကြောင့် ပဲ ဖြစ် မယ် ထင် ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် စပါး ပရိသတ်တွေ မမေ့သင့်တာ က ဒါဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လောကကြီး ဆိုတာ ပါပဲ ။ မနေ့ တုန်းက ကိုယ့်ရဲ့ ရန်သူ ဟာ ဒီကနေ့ မှာ ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်လာနိုင် သလို ကိုယ့် သိပ်ချစ်ရတဲ့ သူတွေ ကပဲ ကိုယ့်ရဲ့ နှလုံးသားကို ဆုပ်ကိုင်ချေမွ သွားတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ မော်ရင်ဟို စပါးနည်းပြ ဖြစ်လာ ရတာ ထူးဆန်း မနေတော့ ပါဘူး ။
ဒါကြောင့် စပါး ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ အသင်း ကို ဘယ်လို မျိုး ရလဒ် ထွက်ပေါ် အောင် လုပ်ပေးနိုင် မလဲ ဆိုတာ ကို မသိသေးတဲ့ အချိန် ကတည်းက နည်းပြသစ် တစ်ယောက် ကို ၀န်းရံ ဖို့ မစဉ်းစားဘဲ တိုက်ခိုက် ထိုးနှက် ဖို့ စဉ်းစား နေတာ ကတော့ သိပ်ကို စောလွန်းပြီး အမြင် ကျဉ်းမြောင်း နေတယ်လို့ ခံစား ရမိပါကြောင်း . . . .